Archive du 01-avril-2022
Tsy fandriampahalemana Mamono, mandroba, maka taova ny jiolahy
Ramatoa iray nandeha moto BWS no nisy nitifitra teny Namontana omaly 31 martsa tokony ho tamin'ny 4 ora sy sasany tolakandro.
Manao kirin’antitra ka ny herin-tsaina mety mbola ao ihany, fa ny hoza-pe mihitsy no efa tsy afaka intsony. Mifankaiza amin’izany moa ny zava-misy ankehitriny?
Fifandraisan-davitra Miha ratsy hatrany ny tolotra
Tao anatin’ny herinandro indray izay. Tsy tomombana ny fifandraisana amin’ny antso an-telefaonina. Tapatapaka, tapaka ho azy ny antso, miha tsy hita ny fifandraisana na “réseau”.
Fifidianana rafitra sy lalampanorenana 30 taona mahery izao no nitakiana azy
Fahatsiarovana ny 31 martsa 1992 notifirana ireo mpitaky ny fahalalahana misafidy lalampanorenana roa dia ny "Etat unitaire" sy ny "Etat Fédéral",
Orinasa JIRAMA Milaza fa hamaha olana ireo tompon’andraikitra vaovao
Ainga vao ho an’ny orinasa JIRAMA ny fanendrena ireo mpitantana vaovao rehetra. Natolotry ny Tale Jeneraly, notronon'ny Filohan'ny filankevim-pitantanana sy ireo mpikambana rehetra ao aminy,
Famerana ny vidin’ny PPN Sao dia lasa resaka ambony latabatra fotsiny e ?
Taorian’ny fankatoavana teo anivon’ny filankevitry ny minisitra ny fepetra famerana ny vidin'entana, natomboky ny Minisitra Edgard Razafindravahy ny fifampidinihana amin’ireo mpanafatra entana ilaina andavanandro (PPN).
Zavatra tsy vita Diso fanantenana amin-dRajoelina i Manakara…
Tany Manakara no nanamarihan’ny Filoha Rajoelina ny fahatsiarovana ny faha-75 taonan’ny tolo-panafahana 29 martsa 1947.
Adilahy politikan’ny mpitondra Miha mitoka-monina i Rajoelina
Hafahafa ny rivotra politika mitsoaka ao anatin’izao herintaona sy tapany tsy hahatongavan’ny fifidianana izao. Toa voahilika tsikelikely ireo olona tena nandrafitra izao Fitondrana izao,
Fampianarana ambony tsy miankina Nisokatra ny Université privée d’Ambohidratrimo
Misokatra ankehitriny sekoly ambony Université privée d’Ambohidratrimo ka làlam-piofanana na « mention » miisa 3 no efa nahazoana « habilitation»,
Antoko politika PSD “Efa mitsipozipozy izao fitondrana izao”
Ny olona ivelan’ny fitondrana izao dia samy mikarakara ny antokony sy mijery ny fandehan’ny raharaham-pirenena, hoy omaly ny avy eo anivon’ny antoko politika PSD, f
Antananarivo Renivohitra Tsy maintsy hiova lalana ny teleferika
Mitombo 3% isan-taona ny mponina eto Madagasikara. Raha araka ny vinavina dia hitombo hatrany amin’ny 4,5 tapitrisa izany hatramin’ny taona 2033 araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena, antony tsy maintsy hirosoana
Fiovaovan’ny toetr’andro Mamely ny kohoka sy aretin-tratra
Tafiditra eo anelanelan’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra sy ny ririnina isika izao. Miovaova be ihany ny toetr’andro vokatr’izany ka mety mafanabe indraindray nefa mety mangatsiaka be tampoka ihany koa.
Politika Hanohy ny tolona ny federalista
Feno 30 taona omaly ny nahafaty voatifitra ireo federalista, Laha Gaston sy ny namany, tetsy Soanierana – Ankadimbahoaka.
Fitateranana Andrasana izay mety ho fidinan’ny saram-piaramanidina
“Tsy voafetra ny fivezivezen’ireo fiaramanidina, afaka mandeha araka izay ho afany ny kaompania”, hoy ny minisitry ny fizahantany, Randriamandranto Joel, omaly.
Fifidianana 2023 Hikorontana raha tsy mazava ny fitsipi-dalao
Herintaona sy tapany mialohan’ny fifidianana Filoham-pirenena 2023 isika amin’izao fotoana izao raha ho voatazona ny lojika ara-tetiandro.
Prix Pierre Castel Hanampiana ireo tanora mpandraharaha sangany
Tsy misy tsara ohatra ny manangana orinasa ho an’ny tena amin’ny resaka fihariana. Ankoatra ny fandraisana anjara amin’ny fanatsarana ny toekarem-pirenena dia afaka manampy ny mpiray tanindrazana ihany koa,
Tamberin’andraikitr’ireo andrim-panjakana Andrasana izay ho vokatry ny atrikasa natao
Nifarana omaly ny atrikasa fanamafisana ny tamberin’andraikitr’ireo andrim-panjakana eto Madagasikara ho fanabeazam-boho ny fandriampahalemana eto amintsika izay natao nandritry ny 2 andro.
Soavinandriana Mitsabo ireo ankizy marary fo ny hopialy miaramila
Mitsabo ireo ankizy marary fo ny Hopitaly Miaramila Soavinandrina. Efa vita eto amintsika ny fandidina ny fo na « chirurgie à cœur ouvert » araka izany.
Faha-10 taonan’ny AFHAM Nomarihina tamin’ny horonantsary hoe “Debout”
Horonantsary fanadihadiana momba ny andavanandrom-piainan’ireo olona manana fahasembanana no nentina namarana ny hetsika fankalazana ny tsingerintaona faha-10 nisian’ny AFHAM,
Solontenan'ny FMF any Qatar Ny ekipan-dRaoul no nantsoin’ny FIFA
Manatrika ny Kongresin’ny Federasionina Iraisam-pirenena ho an’ny taranja baolina kitra na ny FIFA tanterahina any Qatar amin'izao Atoa Victorien Andrianony Filoha lefitra voaloan’ny Federasionina Malagasy ho an’ny taranja baolina
Fitateram-bahoaka eto Iarivo Efa miseho tava ary mandrahona ny olon-dratsy
Niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera Facebook omaly ny rakintsary mampiseho tovolahy iray mandrahona mpandeha fa tsy migadra izy fa ny findain’ilay mikasa maka sary azy sy ilay mpandeha no mety ho potika. T